ko htike's prosaic collection: ဘ၀ နောက်ဆုံး အချိန်မှာတောင် နောင်တရပုံ မပေါ်သေးသော သန်းရွှေ
Posted by ကိုထိုက် at 11:54
I hope Than Shwe dies very soon. I urge on the members of the Tatmadaw to assassinate Than Shwe. Than Shwe is the single opposition to democracy process, national reconciliation, and good Burmese economy. Tatmadaw comrades, if you love Burma, your people, your parents and your religion, you must kill Than Shwe. Since Than Shwe is an old and ill fart, even if you wound him in the arm or leg, he will surely die from shock and blood lost. If Than Shwe dies, other SPDC generals will fall like dominos. The one who takes the challenge of killing Than Shwe will no doubt be the hero of Burma.
ဒီလို အိုနာမစွမ်းကြီး(အလုပ်လုပ်နိုင်တော့တဲ့ အရွယ်မဟုတ်) ကို အာဏာကြီးခွင့် ခုချိန်ထိ ပေးထားတယ်ဆိုတာ(နိုင်ငံအတွက် အသုံးကျတယ်ဆိုထားပါတော့) ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ဘုရင်ရူး နဲ့ ကျွန်ရူး စိတ်တွေ လွှမ်းမိုးကျန်ရှိနေသေးလို့ဆိုတာ သက်သေပြနေသလိုပါပဲ။
စေ့စေ့စပ်စပ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုရင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ စိတ်ဓာတ်ရေးရာညံ့ဖျင်းတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ တာဝန်ယူမှုကင်းမဲ့လွန်းကြပါတယ်။ သေခါနီးအဘိုးကြီးတစ်ယောက်ခေါင်းပေါ် အပြစ်တွေအကုန်ပုံချကြမှာမြင်ယောင်မိပါတယ်။ နောက်ဆုံး အဖြေမှာကား ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကုန်လုံးဟာ စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျ ယုတ်မာလွန်းကြသူတွေချည်းပဲဖြစ်ကြကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
18禁地論壇Mr.愛愛聊論壇玫瑰公爵成人論壇荳蔻情色論壇exBT成人論壇亞洲情色論壇辣辣情色論壇激突綜合論壇gogobox論壇伊莉論壇討論區不夜城情色論壇日本情色論壇視訊辣妹0509免費 視訊聊天秀洪爺視訊網性感妹妹等你喔免費a片線上看免費a片線上看免費a片線上看免費a片線上看免費a片線上看免費a片線上看免費a片線上看免費a片線上看免費a片線上看免費a片線上看小高聊天室小高聊天室小高聊天室小高聊天室小高聊天室小高聊天室小高聊天室小高聊天室小高聊天室網路交友聊天室麗的色遊戲網路交友聊天室網路交友聊天室網路交友聊天室網路交友聊天室網路交友聊天室網路交友聊天室網路交友聊天室網路交友聊天室網路交友聊天室080苗栗人聊天室麗的色遊戲080苗栗人聊天室080苗栗人聊天室080苗栗人聊天室080苗栗人聊天室080苗栗人聊天室080苗栗人聊天室080苗栗人聊天室080苗栗人聊天室080苗栗人聊天室原住民聊天室麗的色遊戲原住民聊天室原住民聊天室原住民聊天室原住民聊天室原住民聊天室原住民聊天室原住民聊天室原住民聊天室原住民聊天室aio交友愛情館麗的色遊戲aio交友愛情館aio交友愛情館aio交友愛情館aio交友愛情館aio交友愛情館aio交友愛情館aio交友愛情館aio交友愛情館aio交友愛情館et正妹牆etwalls com麗的色遊戲et正妹牆etwalls com